WestJet dia manohana ny fanaovana vaksiny tsy maintsy atao ho an'ireo mpiasa fiaramanidina
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » WestJet dia manohana ny fanaovana vaksiny tsy maintsy atao ho an'ireo mpiasa fiaramanidina
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Aogositra 13, 2021
Miasa ny zotram-piaramanidina miasa amin'ny fampiharana ny fepetra takiana amin'ny vaksiny tsy maintsy ataon'ny governemanta ho an'ireo mpiasan'ny kaompaniam-pitaterana federaly amin'ny faran'ny volana oktobra.
WestJet amin'izao fotoana izao dia manana mpiasa mavitrika manodidina ny 6,000 WestJetters, raha 4000 kosa mijanona ho mavitrika na mavomavo.
Manana mpiasa mavitrika maherin'ny 340 i Swoop amin'izao fotoana izao, ary maherin'ny 170 no mijanona ho tsy miasa na mavomavo.
Ny Vondrona WestJet dia hanaraka ny fepetra takiana amin'ireo mpitsangatsangana an-trano mba hanao vaksiny feno na hosedraina alohan'ny hiaingany.
Nankasitraka ny fanambarana nataon'ny minisitry ny fitaterana Omar Alghabra ny vondrona WestJet androany mikasika ny vaksiny tsy maintsy atao ho an'ireo mpiasan'ny kaompaniam-pitantanana federaly.
Minisitry ny fitaterana Omar Alghabra
"Manohy mpiara-miasa matanjaka amin'ny famelomana vaksinin'i Kanada izahay ary miasa am-pahavitrihana amin'ny fampiharana ny politikan'ny governemanta momba ny vaksinim-bidy ho an'ny mpiasa fiaramanidina," hoy i Mark Porter, WestJet Filoha lefitra mpanatanteraka, Vahoaka sy kolontsaina. "Ny fanaovana vaksiny no fomba mahomby indrindra hiantohana ny fiarovana ireo vahininay sy ny mpiasanay, na dia hikatona ny fiparitahan'ny COVID-19 aza."
"Fantatsika fa hanana fanontaniana ny olontsika ary hiady hevitra amin'ny mpiasa sy ny vondrona misy antsika amin'ny fotoana tena izy," hoy hatrany Atoa Porter. "Mitady antsipiriany fanampiny amin'ny governemanta federaly izahay momba ny fepetra takiana ary manolo-tena izahay hiara-hiasa hiantohana ny fahombiazan'ny fampiharana ny politika amin'ny faran'ny volana oktobra."
WestJet amin'izao fotoana izao dia manana mpiasa mavitrika manodidina ny 6,000 WestJetters, raha 4000 kosa mijanona ho mavitrika na mavesatra volo. Swoop Amin'izao fotoana izao dia manana mpiasa mavitrika misy mpiasa 340, raha mihoatra ny 170 kosa dia mijanona ho mavitrika na mavesatra volo.
The WestJet Group hanaraka ny fepetra takiana amin'ireo mpitsangatsangana an-trano mba hanao vaksiny feno na hosedraina alohan'ny hiaingany. Ny vondrona fiaramanidina dia miaro fa ny fanandramana antigen haingana dia safidy azo ekena, azo raisina ary takatry ny zotra ho an'ireo mpandeha tsy voadio.
Torolàlana momba ny fahasalamana COVID-19 vaovao ho an'ny Entebbe...
Lalana fitsangatsanganana vaovao: Ny fiakaran'ny vidin'ny dia ary ...
Ny seranam-piaramanidina malaza Hawaii dia nofaina tamin'ny sivily ...
An'arivony maro no tafaporitsaka satria manafoana olona an-jatony maro hafa ...
Manafoana ny sidina Bangkok rehetra ny Aeroflot noho ny loza ateraky ny ...
Ny fizahan-tany any Jamaika dia manome valisoa ny mpilatsaka an-tsitrapo Olaimpika Japoney ...
Nitsidika ny fizahantany ny minisitry ny fizahan-tany any Seychelles ...
Tombontsoa fizahantany vao hita tao amin'ny Niger Delta ao ...
Fitsipika vaovao momba ny sisintany ho an'ny mpitsidika kanadiana: fanjakana amerikana 10 ...
IMEX America mijery ny ho avy miaraka amin'ny tanjona ary ...
Ny sambo Pandaw dia mikatona ho amin'ny asa soa noho ny...
Fizahan-tany Seychelles sy Qatar Airways mizara vaovao ...
Sandals Resorts dia namoaka kapa vaovao nohavaozina Royal...
USA Tenisy ambony latabatra sy Hotel Blossom any Houston Ankehitriny manatevin-daharana ...